Famerenana fakan-tsary OnePlus 8T: tsara ve ny fakan-tsary quad? | Androidsis
Ny fakantsary an'ny OnePlus 8T dia tsara, saingy tsy mahatratra hatramin'ny farany ambony [Fijerenan'ny fakan-tsary]
Isaky ny taranaka vaovao misy finday avo lenta, avo kokoa ny fitakian'ny mpampiasa eo amin'ny sehatry ny fakana sary, ka izany no mahatonga ny mpanamboatra finday avo lenta manatsara ny fakantsary misy ny findainy, ary vao mainka ao amin'ny sainam-pireneny. Ity fitsipika ity dia ampiharin'ny OnePlus miaraka amin'ny maodely vaovao ihany koa.
El OnePlus 8T Tsy io no finday mandroso indrindra ao amin'ny katalaogin'ny orinasa (izy no OnePlus 8 Pro), fa ny faharoa dia. Na dia amin'ny vidiny mora aza izy io dia tsy manome ny fampisehoana avo indrindra ny rafitry ny fakantsary fa mbola manome valiny sary tena tsara. Ny tena izy dia tsy mifaninana amin'ny telefaona premium bebe kokoa izy ity, ary zavatra hita miharihary amin'ny famerenana nataon'i DxOMark tamin'ny fakantsarin'ny OnePlus 8T ity.
Ny OnePlus 8T dia manana rafitra fakantsary aoriana tsara, fa tsy ny tsara indrindra
Alohan'ny hamariparitana tsara izay nataon'ny finday tamin'ny andrana dia tsara ny manamarika ny fomba fananganana ny rafitry ny fakantsariny, izay quadruple. Izy io dia manana sensor lehibe 48 MP miaraka amina f / 1.7, solosaina 16 MP misy zoro malalaka f / 2.2, mpitifitra makro 5 MP miaraka amina f / 2.4 ary bokeh 2 MP iray hafa koa miaraka amin'ny vorona f / 2.4.
Isa naoty fakan-tsary OnePlus 8T | DxOMark
Miaraka amin'ny isa fampiasa amin'ny fakantsary 111 nomen'ny manam-pahaizana DxOMark taorian'ny fitsapana sy fanombanana marobe, Ny OnePlus 8T dia eo afovoan'ny laharana amin'ireo telefaona misy fakan-tsary tsara indrindra eo amin'ny sehatry ny fotoana, mamatotra tarehimarika feno amin'ny terminal toy ny Google Pixel 4a sy Sony's Xperia 5 Mark II.
Araka ny tatitra, ny fakantsary avo lenta dia afaka maka sary misy valiny tsara amin'ny toe-javatra mety indrindra, izay hita taratra amin'ny isa 115 amin'ny sokajy sary. Saingy, ao anatin'ny toe-javatra somary sarotra, dia misy lesoka marihitra hita.
Amin'ny ankapobeny, ny OnePlus 8T dia mahazo sary miaraka amina fampirantiana mendrika, saingy mazàna ireo dia manana elanelam-potoana somary voafetra izay fintina amin'ny faritra mamirapiratra sy / na maizina ao anaty fepetra mifanohitra be. Rehefa mitifitra amin'ny alina dia nahita ny fiovana matanjaka be ihany koa ny fitsapana ny DxOMark amin'ny ankamaroan'ny sary nalaina.
Ny fandikana ny loko isaky ny fitifirana dia tsy matetika no tena marina koa. Sary maro dia maro no mampiseho ny volon-doko na ny fananahana ny loko tsy araka ny tokony nampoizina, ary vao mainka aza rehefa ao anaty hazavana ambany ianao.
Ny artifact sary, izay fanodikodinam-po amin'ny sary na lesoka nateraky ny fanombanana ny fetrany, dia tsy fahita ao amin'ny OnePlus 8T, fa matetika dia misy amina sary maromaro, na dia amin'ny fomba malina aza. Misy ihany koa ny fahasahiranana mifantoka amin'ny tifitra sasany.
DxOMark dia manasongadina izany ny maody bokeh OnePlus 8T dia manao asa tena tsara , ka miteraka vokatra manjavozavo eny an-tsaha ary manana fetran'ny lohahevitra mifantoka tsara.
Ny OnePlus 8T dia tsy manana sensor telephoto ao amin'ny modely fakantsary ihany koa. Noho izany, araka ny efa nampoizina, ny kalitaon'ny sary an'ny tifitra zoom dia tsy ny tsara indrindra, ankoatry ny finday fa tsy afaka manao fanamafisana lehibe.
Ny fakan-tsary malalaka dia manome zana fomba fijery tsara, fa tsy ny midadasika indrindra, ary matetika ianao no mahatsikaritra ny fahaverezan'ny pitsopitsony maranitra sy ny tabataba amin'ireo fakantsary avy amin'ity sensor ity. Ary koa, zavakanto betsaka kokoa dia matetika no hita ao anaty tifitra misy zoro lavitra noho ireo nalaina tamin'ny hidin-trano lehibe.
Miorina amin'ny fandraketana an-tsary, ny isa 102 dia mametraka azy eo afovoan'ny laharana misy ny sehatra, izay mamela antsika finday mendrika azy io, fa tsy iray amin'ireo tsara indrindra, dia tsara homarihina. Ny fakantsary dia manome fanamafisam-peo tena tsara, fandanjalanjana fotsy mendrika ary loko mahafinaritra.ary koa ny haavon'ny tabataba voafehy tsara, raha mbola tsy miseho amin'ny toe-javatra maivana ianao.
Ny zavatra azo hatsaraina amin'ity fitaovana ity dia ny rafi-pifantohana amin'ny maody fandraisam-peo, izay tsy mahomby amin'ny tarehin-jiro ambany, tsy dia mazava loatra, miaraka amin'ny hafainganam-pandeha izay ahena be, raha oharina amin'ny zavatra mety ho tratrarina amin'ny toe-jiro tsara. Na izany aza, mahavita mifantoka tsara amin'ny farany izy.
Raha fintinina, tsy miatrika ilay finday avo lenta miaraka amina fakantsary tsara indrindra ho an'ny rehetra izahay; Misy safidy mahaliana kokoa izay manome valiny tsara kokoa, ary manana ohatra telo fotsiny amin'izany isika amin'ny Huawei Mate 40, Xiaomi Mi 11 ary Galaxy S21. Na izany aza, ny vokatra natolotry ny telefaona dia tsy ratsy koa; tena tsara izy ireo, ary mirona hahatratra ny tena andrasana, noho izany safidy tsara ho an'ny mpaka sary mafana fo, tanana izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny fakantsary an'ny OnePlus 8T dia tsara, saingy tsy mahatratra hatramin'ny farany ambony [Fijerenan'ny fakan-tsary]
Clan N dia avy amin'ny Steam ho toy ny lalao ady karazana Double Dragon lehibe
Mandehana mamaky ny lanitra, ny tany ary ny rano ao amin'ny MMORPG Blade & Soul: Revolution